कर्णसँग विवाह गर्न चाहन्थिन् द्रौपदी, यस्तो छ रोचक पाटो ! « LiveMandu
कर्णसँग विवाह गर्न चाहन्थिन् द्रौपदी, यस्तो छ रोचक पाटो !
२० चैत्र २०७७, शुक्रबार ०४:३४
काठमाडौं । महाभारत पढ्ने र सुन्नेले द्रौपदीको बारेमा पनि सुन्नु भएकै होला । उनी पाँच पाण्डवकी साझा श्रीमती भएका कारण पनि धेरै विवादमा आइन् ।
राजा द्रुपदले यज्ञको आयोजना गरी पुत्र धृष्टद्युम्न र पुत्री द्रौपदीलाई प्राप्त गरेका थिए । जन्मेको कयौँवर्षसम्म पनि राजा द्रुपदले आफ्नी पुत्रीको रुपमा द्रौपदीलाई स्वीकार गरेका थिएनन् ।
पाँच पाण्डवसँग विवाहपछि द्रौपदी पाञ्चाली नामबाट चिनिएकी थिइन् । द्रौपदीले अर्जुनभन्दा पहिला दानवीर कर्णसँग प्रेम गरेकी थिइन् । तर आफ्नो बुबा द्रुपदको प्रतिशोधपूर्ण प्रतिज्ञा र मानसम्मानका कारण द्रौपदी र कर्णको प्रेम सफल हुन सकेन ।
पाञ्चाल देशका राजा द्रुपदकी पुत्री भएकी कारण द्रौपदीको सुन्दरताका बारेमा कयौँ राज्यमा चर्चा चल्ने गर्थे । उनको सुन्दरता ,बुद्धि र विवेक देखेर धेरै राजाहरु मोहित भएका थिए ।